I-cadastre kaMasipala, yeyiphi indlela efanelekileyo - iGeofumadas
Agasti, 2010 cadastre, GPS / Izixhobo
Iminyaka eliqela yophando, kwaye lo mbuzo uhlala uqhelekile. Yeyiphi indlela efanelekileyo yokubhalisa?
Siyavuma ukuba le ayisiyo iresiphi, kuba kukho iimeko ezahlukeneyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo kwaye indlela nganye inokuba nezinto ezichaseneyo kwimimandla eyahlukeneyo. Ke ukunika ukukhanya kwiposti, masihlafune kwezinye izinto ezinokuba luncedo kwizigqibo, ngesahluko ukuhlangula ukuvelisa kwiforum yengxoxo eqale kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
Kutheni i-cadastre kamasipala. Ndicacisa oku, kuba isithuba iyasebenza kwindalo esingqongileyo, apho umasipala afuna ukwenza i-cadastre yakhe, ngeendlela zakhe okanye ngenkxaso yeprojekthi yentsebenziswano. Ayisebenzi kwiprojekthi enkulu yala maxesha kwinqanaba lommandla okanye likazwelonke, elikhokelwa liziko elime kwindawo enye, eliya kuba neemeko ezingcono zokuphumeza iprojekthi kunye nemali eninzi yokuyisebenzisa…
Le meko ke, ngoko, umasipala, ubungakanani rhoqo, nto leyo eya kuba kakhulu malunga 5,000 izakhiwo ezidolophini kwiidolophu eziphambili, malunga 4 emikhulu, kodwa ngaphantsi kwe iipropati 1,000 kunye namanye amaphandle okanye nantoni bakubize i kwelinye icala, rustic.
Cadastre yintoni. Oku kubalulekile ukuba kuchazwe, kuba indlela echanekileyo ye-cadastre enendlela esemthethweni ayizukufana ukuba indlela yolawulo lwemali kuphela okanye ulawulo lokusetyenziswa komhlaba. Kananjalo kuba ukuba kukho ifayile ye- indlela yovavanyo, ukulingana kwezakhiwo okanye ukulinganiswa kwesityalo esisigxina kufuna ezinye iindlela zokukwenza inkqubo iphumelele ngakumbi.
Into ephambili kumasipala ongenayo i-cadastre ayikho ngokuchaneka kwayo, kukuba nayo njengendawo yokuyisebenzisa. Ke kuya kufuneka uthathele ingqalelo iindlela ezizinzileyo, ezinceda ukugqiba uvavanyo olupheleleyo lukamasipala, ukuba uzinikezele ekusebenziseni, ekuhlaziyeni nasekuhlaziyeni ukuchaneka.
Ezinye iindlela ndizamile. Iminyaka emine edlulileyo siye sazama iindlela ezahlukeneyo, kuxhomekeke kwimimiselo yomasipala, apha ndifingqa abanye:
Ifotogrammetry Kancinci kancinci, kwiindawo ezisezidolophini le ndlela iwela ekusetyenzisweni, ikakhulu kuba ayisiyoqoqosho ngokunxulumene nokuchaneka kwayo. Akukho nkampani iya kwenza inqwelomoya kubude obuziimitha ezili-10,000 10 ngeyona ndawo incinci yedolophu; ukuyenzela umasipala wonke kunokungafumaneki ngemali yakhe. Ke ngoko, ukuba ukutolikwa kwesithombe kusetyenziswa kwiindawo ezisezidolophini, kuhlala kufanelekile ukulinganisa imida kwaye ekugqibeleni ukuchaneka akuyi kuba kuhle kakhulu kwiindawo apho abantu bakhupha imela ngeesentimitha ezili-XNUMX. Nangona kunjalo, kwimeko yeendawo ezisemaphandleni, kuyenzeka kakhulu kuba ukugubungela okukhulu kuyaphunyezwa ngaphandle kokungena kumda ngamnye kwaye ukuchaneka kwanele kuba iziza zinendawo ezinkulu.
I-photointerpretation + GPS. Ukuba unayo i-orthophoto, inokusetyenziswa ngokugqibeleleyo kwindawo yasemaphandleni eneziphumo ezihle kakhulu. Ukucacisa, sithetha nge-orthophoto evela kwifoto yasemoyeni, kuba umfanekiso wesatellite olungelelanisiweyo ngoku onepikseli engaphantsi kwemitha enye unokugqwetha okuninzi kakhulu kwiindawo zobume bendawo obungaqhelekanga, ukulungiselela ukusetyenziswa ngcono kobhalo lukaGoogle. Ukuziqhelanisa, ndiye ndaqaphela ukuba ukudibanisa ukusetyenziswa kokuphrinta (i-orthophoto) ukukhulisa kunye nokuchaneka okuphantsi kwe-GPS (Garmin 3 ukuya kwi-5 yeemitha) kuzisa iziphumo ezisebenzayo kunokucofa iifoto zomoya kunye ne-stereoscope kwaye emva koko uye kukhuliso.
Anditsho ukuba ziyalahlwa kodwa ziyathandabuzeka kwiiprojekthi zoomasipala abancinci, ekusebenzeni kwazo phambi kwezinye izibonelelo ngoku ezivumela i-GPS ngomboniso we-raster okanye ngenxa yokuba akusoloko kusenzeka ukuba kufumaneke oontanga okanye oovimba abanakho ukwenza ubuchule. Ukucofa iifoto akuzi nazinto zilungileyo kwimicimbi echanekileyo, kuba bububanzi be -graphgraph ngokukhawuleza kwi-1: 10,000 ye-orthophoto eprintiweyo eya kuba ziimitha ezili-10 kunye nempazamo esele yenziwe ingqokelela yesoftware. Kananjalo umbuzo ukuba ungqameko lwenduli oluboniswa yistereososcope kakuhle kodwa alubonakali kushicilelo, ulahliwe kuba isenzo sibonisa ukuba oku kunokwenzeka kwigcisa elivela kwindlela eqhelekileyo, i-novice ayizukuyibona Zombini iindlela kwaye uya kuba ngcono xa uthatha amanqaku e-GPS ukufumana iibheringi zakho. Kwaye emva kokutolikwa kwezinye iinkcukacha ezinje ngokusetyenziswa komhlaba, iindlela zangoku zokujonga kude zenza umsebenzi ongcono kunye nexabiso eliphantsi ngokuhlelwa okubekwe esweni.
Ikhampasi yeGPS +. Le ndlela iluncedo kakhulu ukuba unemali encinci. Ndiyisebenzisile kwiindawo ezisezidolophini, ndisebenzisa isibini se-submeter yokuchaneka kwe-GPS ukuqhubekeka kwigridi yesitalato, kunye nokusebenzisa ikhampasi ukubopha iziphelo. Njengoko iteyiphu isetyenziselwa ukulinganisa imida, impazamo igqithiselwa esitalatweni, ishiye ukuchana kwemida engaphantsi kweesentimitha ezili-10 kwaye igqibelele ngokubhekisele kuma-moorings ane-GPS kufutshane nemitha. Kuya kufuneka ulinganise imali kwaye ufumane izikhombisi ngoonxantathu. Ayifanelekanga ukuba isaveyi ineziphumo zomthetho, ukuba izihloko zepropathi okanye izatifikethi zecadastral ezinexabiso elisemthethweni ziya kunikwa; ngenxa yoko, iya kuhlala kuvavanyo lwentsimi ngexesha lokufaka isicelo.
Isikhululo se-GPS + esipheleleyo. Le ndlela isebenzayo, kuba ivumela ukuchaneka kakuhle kunye nolwazi Ubukhulu be3 kungekudala iyakuba luncedo. Ifuna i-GPS yokujonga kuqala amanqaku amabini okuqala, kunye nokuthatha iindawo ezimbalwa-ezaneleyo-zokuthintela impazamo ekuthatheni umbono ongalunganga. Akunyanzelekanga ukuba ube nesitishi esipheleleyo, njengoko inokurentwa, kunye neendawo zeGPS ezinokuqeshwa ngokukodwa. Uya kusoloko kufuneka ulinganise iimali, ezinokuxhaswa yi-orthophoto, ikhampasi okanye i-triangulation yi-moorings, eyona nto ifanelekileyo.
Ukuba bekuya kum ukwenza isigqibo, ngeedolophu bendiya kuhamba ngesikhululo esipheleleyo. Ukuthatha abanye abantwana baphume kwisikolo esiphakamileyo kwiikhompyuter, babaqeqeshe kwaye ubakhulule ukuba basebenze imisebenzi. Kwakhona kumasipala okanye umbutho okanye umbutho wamabhunga esixeko, ukufumana isikhululo esipheleleyo esixabisa i-7,000 yeedola asiyotyalo-mali olubi, kuba ukusetyenziswa ngaphaya kwe-cadastre kuvavanyo, ukuma okanye ukwenziwa kweeprojekthi zobunjineli kutyalo-mali olulungileyo. Kufuneka ujonge uqeqesho lwabasebenzi.
Kwale nto ndiyithetha ngesitishi esipheleleyo, robotics ayisebenzi kwiindawo apho abasebenzi bengabizi kwaye apho ukuba uvala isiqingatha iliso lesitishi, iselfowuni yabiwe ... kwaye ukuba unayo ihlonipho.
Ukuqukumbela, nabani na othatha isigqibo sendlela kufuneka aqonde ukuba imephu ye-cadastral iya kuhlala ingumbonakaliso ongacacanga wenyani. Kwaye ichanekile ngokomlinganiso wethu wangoku, kwiminyaka embalwa iya kubuzwa ngenxa yokungahambelani kwayo ngokunxulumene nentaba yeMars.
Indlela efanelekileyo yileyo ezinzileyo ngemali yakhe, utyalo-mali lwayo lufunyenwe ngexesha elifutshane kwaye siza kuba nalo lonke umasipala ophakanyiswe ngamaxesha amabini kuphela karhulumente.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Egeomates, iifoto kuphela
Post Next Ngaba siphila kwisikhululo esiphezulu se-robotic?Okulandelayo »
Iimpendulo eziya "kumasipala waseCadastre, yeyiphi indlela efanelekileyo"
Umalume wam wafa kwaye ndifuna ukutshintsha igama kwaye ndiqhubeke ndihlawula.
Le meko ke, ngoko, umasipala, ubungakanani rhoqo, nto leyo eya kuba kakhulu malunga 5,000 izakhiwo ezidolophini kwiidolophu eziphambili, malunga 4 emikhulu, kodwa ngaphantsi kwe iipropati 1,000 kunye namanye amaphandle okanye nantoni bakubize i kwelinye icala, rustic
I-4,787 i-real estate yase-dolophu, i-2,138 idolophu yase-dolophu kwiidolophana ezincinane, ii-18,000 zasemaphandleni.
Ewe, oku kunye nelinye icala lomlambo.
Ewe, kwiminyaka ye-8, ngokuvunywa / isivumelwano / ukunikezelwa kweempahla zecandelo kwi-5 iminyaka kunye nokubuyiswa kweengxenye zeemali ezifunyenweyo, ukuba kukho irhafu yerhafu.
Umasipala omkhulu uya kuba nemali eninzi, kungekhona ixesha elide.
«Siza kuba nawo na umasipala sonke ngokwamaxesha amabini karhulumente?»
Kuza kube nini umninimzi?